"Awukho umkhawulo ekupheleleni!" - ngakho uya zwi abadumile. Nokho, kukhona njalo labo ezikahle ibekwe ukufeza noma iyiphi umsebenzi. Basuke bahlonishwe, akhuleka kubo, ngibazonde lapho ... Kodwa abambalwa kakhulu abantu bazi ukuthi umsebenzi master ngokuvamile kuwufanele womsebenzi onzima nomsizi wakhe - osafunda.
Osafunda Lo mthakathi sika
umfundi master - journeyman. Ezinsukwini wayeneminyaka egameni lanoma imuphi umuntu osebenza ngomvuzo. Ngokuvamile, ukuze ngiqeqeshwe wanika abafana labavela emindenini lephuyile, ababengenawo ithuba lokwenza umsebenzi wabo siqu noma bathole ifa.
Ekuqaleni osafunda zifike ezingeni wenkosi. Nokho, konke kwabuye nzima, okokuqala, iqiniso lokuthi inkosi kwakubaluleke umsuka Umsizi: ukuze abafundi ukuthatha kuphela oyisihlobo esiseduze, abavame wayengeke abe ithalenta ezidingekayo. Okwesibili, yokuthi lo abanamakhono ngempela intsha abangazange basonta amakhosi bohlobo baphoqeleka ukuba ukhokhe omkhulu Imali yokungena, okuyinto hhayi wonke umuntu, okwase posilen.
Ngenxa yalezi zizathu, i journeyman - umculi ekhungathekile. Eziningi zalezi okuyigugu abantu abaye bahluleka ukufinyelela umsebenzi iphakama, naphezu amathalenta nezipho.
Ulisotja ezimbi ongenayo dream abe jikelele, futhi ngenxa yalokho, ube osafunda ompofu akusho dream abe inkosi. Yiqiniso, ngokoqobo kakhulu baye njalo wafuna induna.
Nokho, kungakhathaliseki ukuthi okunekhono master yayimangalisa, eziningi umsebenzi njalo bawa emahlombe umsizi. "Iyingqayizivele" lamiswa ukufinyelela ezingeni ephrofeshinali, kuzomele ukudoba. Yiqiniso, lo msebenzi Ungasingatha ezimbalwa kakhulu kuphela.
izisebenzi Iningi ngamaholo ayengabafundi beZwi okuphakade. Nokho, kungokwemvelo. Ezinsukwini ubudala ngokuvamile kwenzeka ukuthi osafunda - a lwamaGypsy, ongumlimi ayimizulane, master okukhethekile ewumngcingo beyofuna ukuphila okungcono. Nokho, abafundi abasha endaweni kuyaqabukela ayibonwa.
ngokuvamile isikhundla oyisicashalala kuyisici ngoba ukuziqambela, ukuhlanganiswa of ngokoqobo ngemacembu ukuthi ukuvikela amalungelo nenkululeko eyisisebenzi khulula. Nokho, akukho ukuhlobana, ngabe umphakathi ababazi kanye nezisebenzi, akazange athole impumelelo ezanele. Ngaphezu kwalokho, abaningi baye baphelelwa imisebenzi base bengenela journeymen edlubulundayo wahlala singenamali, futhi ngaleyo ndlela abangu awusona ncengani.
Kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani, abasebenzi edlubulundayo waqala ukuba azulazule ziphenduka isigaba esikhethekile. Babé omunye main ukushayela amabutho uquqaba wamavukelambuso.
Namuhla osafunda - yiliphi isisebenzi. At the stage of kwesikhathi kwecala lezi zisebenzi abizwa ngokuthi abafundi.
Manje abanamakhono kakhulu, ngenkuthalo futhi anake ukhetho kungaba sifinyelele amazinga aphakeme esitebhisini umsebenzi. Iningi lawo abantu lula ukufunda indlela: umfundi-apprentice yokuba yiprofeshinali-master.
Uba kanjani umfundi ye-master
Namuhla, sekulula kakhulu kunezinye Ephakathi, futhi umfundi kungaba ubani has idatha ezidingekayo ukuze umsebenzi othize. Ngaphezu kwalokho, namuhla ongasho ngokwakhe ukuthi usengumfundi. Ngokoqobo nganoma yisiphi uhlobo umsebenzi isixhumanisi kudingekile, kuba namuhla ireferensi iphuzu umsebenzi. Kusuke kufanele kube njalo! Wonke umuntu ongayifinyelela izinga elithile amakhono.
Ngokwesibonelo, umfundi ukwakhiwa induna kubhekwe njengento isisebenzi esinakekela isakhiwo. Umuntu umsebenzi okudala angase bathembele kahle umxhasi abaphezulu, kodwa usomabhizinisi enkulu noma sezombusazwe angaba umfundi umelekeleli abaseduze.
Nokho, othisha engcono babekhona futhi banamakhono zemvelo. Ngakho, akukho amakhosi abakwazi ukukhulisa ungungqondongqondo, uma bethola inkolo abangavumelani kuye isipho walolu hlobo.
Ikhono ayinakukuthenga, ukufundisa noma ukuthuthukisa. Kungaba kuphela ukwambula ngcono kukho konke ukuphila kwakho.
Kuyini wezinwele noma wezinwele namuhla
Constellation Lynx: incazelo, umlando, ezikhangayo
Ukukhangisa kwisikhangisi & Umhlahlandlela